အခြေခံ ပီဇာဒိုးဖုတ်နည်း နှင့် ပီဇာ ဆော့ချက်နည်း | Wutyee Food House
သကြား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
သံလွင်ဆီ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၁။ အရင်ဆုံး ခွက်တစ်ခုထဲတွင် (ရေ၊ yeast၊ ဆား၊ သကြား) တို့ကို သမအောင် ရောမွှေပြီ ပလတ်စတစ်ဖြင့် ၁၀မိနစ်ခန့် အမြုပ်ထွက်သည်အထိ ထားထားပေးပါ။
၂။ ပြီမှ ဇလုံတစ်ခုထဲ ဂျုံ(၂ခွက်ခွဲ) ထည့်ပြီ ထိုအရည်များ အလယ်မှ လောင်းထည့်ပြီ သမအောင် ရောမွှေပေးပါ။
၃။ ဂျုံဒိုးပျော့သွားလျှင် ဂျုံထပ်ထည့်ပြီ ဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်) ထည့်၍ သမအောင် နုယ်ပေးပါ။
၄။ ၁၀မိနစ်ခန့် ထားပြီးမှ ဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်) ထည့်ကာ သမအောင် ထပ်နုယ်ပေးပါ။
မှတ်ချက် ။ ။ ဒိုးသား နူညံ့အောင် ခပ်နာနာလေး နုယ်ပေးပါ။
၃။ နုယ်ထားသော ဂျုံကို အနည်းဆုံး ၃နာရီ ပလတ်စတစ်ဖြင့် အုပ်ပြီ ထားပေးပါက ၃ဆခန့် ဖောင်းလာပါလိမ့်မည်။
၄။ ထို့နောက် ဂျုံဒိုးံမလိမ့်ခင် ဒိုးသားကို ပြန်နုယ်ပြီ အလုံးလုံးလိုက်ပါ။
၅။ ပြီမှ ထလိမ့်တုံးနှင့် အ၀ိုင်းပြား ၁၁- ၁၂ လက်မလောက် ရောက်အောင် လိပ်ပေးပါ။
၅။ ပြီးနောက် ဂျုံဒိုးဘေးပတ်ပတ်လည်ကို အတွန့်လေးများ ပုံဖော်ပေးပါ။
၆။ ပြီးလျှင် ဂျုံကို ပုံတွင်ပါသည့်အတိုင်း ခရင်းဖြစ် အပေါက်လေးများဖောက်ပေးပါ။
၁။ အရင် Oven ကို preheat လုပ်ထားပေးပါ။
၁။ ဂျုံဒိုးကို Oven ထဲထည့်ကာ အပူချိန် ၂၀၀ဒီဂရီ ဖြင့် မိနစ် ၂၀ခန့်ဖုတ်ပေးပါ။
၁။ ခရမ်းချဉ်သီး ၃လုံးကို ရေနွေးဆူဆူထဲ ပြဲအောင် ထည့်ြ့ပူတ်ပေးပါ။ ပြီးလျှင် ခရမ်းချဉ်သီး skin(အခွံ)ကို ခွာပေးပြီး နှုတ်နှုတ်ဆင်းပါ။
၂။ ဒယ်ထဲ ဆီထည့် ကြက်သွန်ဖြူ (နှုတ်နှုတ်ဆင်း) sautee ထိုးပါ။
၃။ ထို့နောက် နှုတ်နှုတ်ဆင်းထားသော ခရမ်းချဉ်သီး၊ ခရမ်းချဉ်သီးအနှစ် (tomato paste)(စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း) ၊ ဂျုံ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း)ထည့်မွှေပေးပါ။
၄။ ခရမ်းချဉ်သီးများ နူးအောင် မြုပ်ရုံ ရေ၁ခွက်ခန့်ထည့်ပေးပါ။
၅။ ပြီးမှ အရသာအပေါ့အငံ့အတွက် ဆား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း)၊ သကြား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း)၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်၊ oregano ထည့်မွှေပေးပါ။
၆။ အနှစ် မပျစ်မကျဲ အနေထားတွင် ချပေးပါ။
Thanks alot. I try.
်Plz try sis 🙂
Wutyee Food House » ၀က်အူချောင်း၊ဟမ်၊နာနတ်သီး၊သံလွင်သီး၊မှို ပီဇာ says:
Wutyee Food House » သက်သက်လွတ် ပီဇာ says:
aww kaung like tar 🙂
ကိုယ်လည်း အိမ်မှာ ကိုယ်တိုင် လုပ်စားကြည့်ပါ့လား။ ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်
အစ်မရေ microwave နဲ့ လား Grill နဲ့လား ညီမစက်က ဒီဂရီမဟုတ်ဘဲ high,medium,low နဲ့ဖြစ်နေလို့ပါ
Grill Oven နဲ့လုပ်ရမှာ။ အပေါ်မီး၊ အောက်မီးနဲ့ ဖုတ်ရတာ။ ဒီဂရီမပါရင် grill ပဲပါတယ် ဖြစ်ဖို့များတယ်။ ဖုတ်လို့ရဘူး… ဒါပေမယ့် ပီဇာကင်နည်းက oven မလိုဘူး http://www.wutyeefoodhouse.com/?p=3560 ဒီလင့်မှာ လုပ်နည်းကြည့်လိုက်နော်…
# ဂျုံ – ၂ခွက်ခွဲ
# ရေ – တစ်ခွက် ဆိုတာက ဘာခွက်နဲ့ချိန်တာလည်း။ သိချင်လို့ပါ။
ခွက် http://oces.okstate.edu/adair/uploaded_files/measuring%20cup.jpg ဒီလင့်ကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါနော်… Measurement ချိန်တဲ့ခွက်လေးတွေ CityMart မှာဝယ်လို့ရတယ်။ ဘယ်လောက်မှ မပေးရပါဘူး၊ အသုံးလည်း တော်တော်ဝင်တယ်
မ​ရေ Measuring spoon ပဲ ​တွေ့တယ်​ ၊ cup မ​တွေ့ဘူး။
Cup က Ocean (သို့) Citymart မှာ ရှိပါတယ်..
အမရေ ပီဇာဒိုးဖုတ်တဲ့အခါ အောက်ကဟာမကပ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ ဆီသုတ်ပေးဖို့လိုသလား ပြောပြပေးပါဦး ကျေးဇူး!!
မလိုပါဘူး။ Aluminum ပြားခံပြီ ကင်လိုက်ရင်ရပါပြီ
ံညီမရေ ဂျုံကဘာအမျိုးအစားလဲ ဒုံးပျံဆိုရလား Plain လား Self rising လား Sauce အတွက်ကဆီနဲနဲဘဲလား လုပ်ကြည့်တာဒိုးသားကကျွတ်နေလို့ ဂျုံ၂ခွက်ခွဲက ၁ချပ်စာလား
Plain ပါပဲ.. ဒိုသားကျွတ်သွားတာ၊ yeast မထည့်လို့များလား။ ဖုတ်လိုက်ရင် ပီဇာဒိုးသားက ပွတက်လာရမှာပါ..
Dry yeast ရှာမရလို့။instant yeast နဲ့ရောရလားရှင်။ instant yeast နဲ့ဆို အချိုးအဆလေးပြောပြပေးပါလားရှင်။
ရတယ် .. Dry yeast နဲ့ အချိုးအစားတူတူပါပဲ..
ဂျုံဒိုးပျော့သွားလျှင် ဂျုံထပ်ထည့်ပြီ ဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်) ထည့်၍ သမအောင် နုယ်ပေးပါ။မ​ပေါ့ရင်​ မလုပ်​ ရဘူး​ပေါ့​နော်​ အမ ။
၄။ ၁၀မိနစ်ခန့် ထားပြီးမှ ဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်) ထည့်ကာ သမအောင် ထပ်နုယ်ပေးပါ။ ဒီအဆင့်​ကို​ရောလုပ်​ရမှာလားဟင်​ ၊ မ​ပျော့ရင်​၊ မရှင်းလို့ပါ​နော်​
ညီမ လုပ်တာ ဒိုးက အ​ပေါ်ကကျွတ်​ပြီး ​အထဲက သိပ်​မကျက်​ချင်​ဘူး၊ ပြီး​တော့ ၃နာရီ နှပ်​ပြီး ဂျုံက အရမ်းကပ်​​နေတယ်​၊ ဘယာလိုလုပ်​ရမလဲ အကြံ​ပေးပါဦး အမ ​ရေ။
မမရေ စစီးပွားဖြစ်အိမ်တွင်း ဒိန်ချင်လုပ်နည်လေးပြော်ပြပေးပါလာခင်ဗျာ်
ဟုတ်ကဲ့ ကြိုးစားပြီ ၀တ်ရည် တင်ပေးပါ့မယ် 🙂
ပီဇာအရမ်းလုပ်တတ်ခြင်တာသွားသင်ဖို့ ကြပြန်တော့လည်းအလုပ်ကတဖက်နဲ့ ဆိုတော့လေခုလိုမျိုးလွယ်လွယ်ကူကူဖတ်လို့ ရတော့ကျေးဇူးနော်မမ လုပ်စားကြည့်အုံးမယ်
အမ….တန်ဆာ ပလာတွေကလေ ဒိုးကို မိနစ် ၂၀ မဖုတ်ခင် ထာ့်ပြီးဖုတ်ရမှာလား…မိနစ် ၂၀ ဖုတ်ပြီးမှ တန်ဆာပလာတွေထည့်ပြီး ထပ်ဖုတ်ရမလား အမ…ခု လုပ်စားကြည့်မလို့ ပါ….
sai lean says:
pizza dough ဘယ်​နှစ်​ရက်​ထားလို့ရပါသလဲ